Site na ngwa Leon3D a ị nwere ike ịtụgharị ihe mbupute 3D gị ka ọ bụrụ onye na-egbu ihe na onye na-akanye ihe | Akụrụngwa n'efu
Ngwa a ị na-ahụ n'aka nri na onyonyo nke dị n'ahịrị ndị a bụ ihe ọhụụ ọhụrụ ndị na-emepụta ihe na ndị injinia mepụtara. ọdụm3d, a arịa e mere baptizim na aha Ọdụm PRO3D Na na ọ bụ ihe ọzọ karịa laser na, arụnyere na gị 3D ngwa nbipute, nwere ike ime ka ọ nweta ikike na-arụ ọrụ dị ka a cutter na osise. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ngwa ga-amasị gị ebe ọ bụ na, maka obere ego na enweghị ịzụta igwe ọhụụ, ị nwere ike ịme ka onye nbipute 3D dị ugbu a rụọ ọrụ na-atọ ụtọ.
Dị ka ndị ụlọ ọrụ kwuru si kwuo:
Nke a bụ otu n'ime ọkwa dị iche iche na akwụkwọ ọhụụ dị iche iche anyị ga-eweta n'ime afọ niile, otu n'ime nzọ maka 2017. Ebumnuche anyị bụ itolite ma anyị chọrọ ime nke a site na ịgbasa ọtụtụ ngwaahịa, ngwa na ngwa ahịa iji nye nhọrọ dị iche iche maka onye ọrụ ọ bụla dị ka mkpa ha si dị.
Leon3D na-ere ihe ngwa ahia nke nwere ike ịgbanye gị ngwa nbipute 3D ka ọ bụrụ onye na-egbu ihe na laser.
Anyị enweghị ike, n'oge a, kwụsị ikpughe ihe ndị na-abịakwute anyị site na Ngalaba Nka na Leon3D ebe otu n'ime ndị njikwa ya kwuru:
Anyị na-etinye aka na ihe ọhụrụ na ntụgharị nke ngwa ọrụ anyị, naanị na nkeji 10 anyị nwere ike ịgbanwe ngwa ọrụ 3D anyị ka ọ bụrụ onye na-egbu ihe na laser. Na mgbakwunye, na mpaghara Nkwado ị ga-ahụ usoro ahịhịa ahịhịa ebe usoro ị ga-agbaso maka ntinye ahụ zuru ezu.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwa Leon3D ọhụrụ a maka ngwa nbipute 3D gị, gwa gị na ọ dịla na ahịa kemgbe Febụwarị 1, 2017 na ndị ahịa ọ bụla enyere ikike yana na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị Thegwọ ọnụahịa, ugbu a n'okpuru nkwalite igba egbe pụrụ iche, bụ 169,95 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Site na ngwa Leon3D a ị nwere ike ịtụgharị ihe mbupute 3D gị ka ọ bụrụ onye na-egbu ihe na onye na-ese ihe